Samaynta Shaqada Dib u Noqoshada - Daraasad la baaray
Samaynta Shaqada Dib u Noqoshada
· Daraasad la baaray
Sannadkii 2016-ka, magaalada dekedda leh ee Kismaayo waxay heshay 25,000 oo qaxooti ah kuwaas oo ku soo noqday xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee Kenya.
Kuwa soo noqonaya ayaa ah kuwo baahi weyn u qaba hoy, caafimaad, waxbarasho, badbaado iyo taageero nolol-raadsi. Dhallinyarada ayaa si gaar ah ugu nugul bii'adaas iyada oo taageero la'aantu ka baxdo halis loogu jiro in lagu qoro kooxaha miliishiyaadka ama hawlaha dambiyada ama tixgelinta guuritaanka aan caadiga ahayn.
Iyadoo si dhow ula shaqeyneysa UNHCR iyo Guddiga Qaxootiga Mareykanka, KIMS waxay bixisay tababbar iyo kobcin bilaash ah si ay uga caawiso in ka badan 550 dhallinyaro dib u soo noqota oo abuuray shirkado yaryar iyaga oo adeegsanaya xarun deyn ah oo loogu talagalay. Ganacsiyada waxaa ka mid ah dukaamada tafaariiqda ah ee iibiya cuntada, dharka iyo alaabada dharka. Qaar ka mid ah haweenka soo-galootiga ah ee soo-galootiga ah waxay ku hawlan yihiin qaybta cuntada iyo makhaayadaha yaryar.
KIMS ayaa sidoo kale siinaysa taageero maaliyadeed oo ku saabsan kalluumeysiga Kismaayo oo ay ku jiraan deynta kalluumeysiga, kalluumeysiga ganacsiyada la xiriira sida dhismaha doonnida iyo dayactirka suuqyada kalluumeysiga, waxqabadka iyo qaybinta.
Iyadoo deymahaas la siinayo KIMS ayaa fududeeyay shaqaalaynta 450 dhalinyaro dib u soo guuray oo ku biiray kalluumeysiga sii kordhaya.
KIMS qaxooti firfircoon ayaa hadda u taagan in ka badan $ 550,000
Webinar cusub: KIMS waxay ka qeyb qaadataa kooxda...